IBetsafe yindawo ephephile, amakhasino anelayisense, ibhonasi ephezulu
I-EcoPayz, ukudluliselwa kweBhange, iThembekile, iVisa, i-MasterCard Maestro
IBetsafe ayigcini ngokubheja ezemidlalo kuphela, futhi iyikhasino le-inthanethi elibanzi elinamathani emidlalo namabhonasi ukuze uqalise.
Ngenye yamapulatifomu amakhulu ku-inthanethi wabadlali ababheja kwimiphumela yezemidlalo nakulabo abagxile ekugembeni kwe-inthanethi. Ukunikezwa okukhulu kuyatholakala kubo bonke abadlali abadala ekhasini eliyinhloko, lapho umdlali angazikhethela ukuthi ufuna ukubheja emiphumeleni yezemidlalo noma uya ekhasino (noma ekhasino bukhoma).
Iwebhusayithi esobala yekhasino ayigcini ngemidwebo yayo efaniswe kahle kuphela, kodwa futhi nangokuhlukahluka nokunikezwayo, okuthi noma ngabe kukhulu kangakanani kugqokwe ngomdwebo ocacile. Lapho uvakashela iwebhusayithi okokuqala, akekho okufanele azizwe elahlekile - inani lemidlalo namathuba ahlinzekwa yikhasino kuyinzuzo enkulu. Iqiniso elithandekayo yikhono lokubikezela imiphumela ebukhoma kanye nenketho yekhasino ebukhoma, kepha sizoyisho lapho sibala okuhle okuhle uBetsafe akhukhula amakhasimende akhe ngakho.
Nakhu ukuthi iBetsafe Casino imayelana nani, elimema abadlali bayo esizeni www.betsafe65.com
• Inika amandla ukubheja okubukhoma. Ungabheja ngemiphumela noma ngezinketho ezithile zemidlalo phakathi nemihlangano. Ngaphezu kokubheja, iBetsafe futhi iyikhasino ebukhoma, i.e. Gameplay yesikhathi sangempela nabanye abadlali.
• Abadlali abanqume ukubhalisa i-akhawunti, iBetsafe inikeza ibhonasi eyamukelekile engu-100% ifinyelela ku-PLN 2000
• Lesi akusona isiphetho samabhonasi. IBetsafe ilungiselele umcimbi okhethekile wabadlali abangomahamba nendlwana, okungukuthi, kulabo abadlala futhi bavakashele isayithi ngeselula noma ithebhulethi. Ibhonasi yeselula (igama elisemthethweni) iyi-50% eyengeziwe kwidiphozi yakho. Lapha futhi, kunomkhawulo we-PLN 100. Ngaphezu kwalokho, iBetsafe ikhuthaza ukubheja kwezemidlalo - ibhonasi ye-PLN 250 yalabo ababeka ukubheja kwabo okokuqala kwezemidlalo.
• Ukusekelwa kwemali yasePoland ngokuqinisekile kuzojabulisa abadlali abavela ezweni lakithi - IBetsafe izilungiselele ukunwetshwa kwayo iye ePoland ngokwethula insizakalo yasePoland.
• Ukuxhaswa ngemali yethu yomndeni akuyona yonke into. I-Betsafe iyi-webhusayithi ephelele yasePoland ezokwazi ukufanisa nolimi ngokuzenzakalelayo.
• Ingabe imali kanye newebhusayithi ngesiPolish kuphansi kakhulu? Ucingo losizo lwamahhala nokusekelwa ngogesi okusebenza amahora we-24, izinsuku ze-7 ngesonto. Yebo ngesiPolish esigcwele.
• Izinketho eziningi ezihlobene nokubheja. Betsafe nayo ine Izipesheli. Kufanelekile ukubhalisela iphephandaba le-casino ukuthola izaziso zokuphakanyiswa okuningi namabhonasi wesikhathi esithile. Ikhasino nayo inesicelo samahhala sokudlala nokulandela umkhondo welukuluku lokufuna ukwazi emhlabeni wezokugembula.
• Ekugcineni, i-cherry ezothokozisa ama-geeks eziteshi ezihlukile zokukhokha. IBetsafe njengenye yamakhasino ambalwa anikeza iziteshi ezicebe kakhulu esingabeka kuzo futhi sikhiphe imali. Nayi: EcoPayz, Bank Transfer, Trustly, show, MasterCard, Maestro.
Ukunikezwa okuqinisekisiwe kokubheja nokugembula. Yile ndlela iBetsafe engafingqwa ngayo ngamagama ambalwa - okuyisisekelo sokubheja kwezemidlalo futhi manje nesikhulumi sekhasino.
»Qala ukudlala kuBetsafe